Nhau - Maitiro Ekuita Yakanaka Hupfu Mill Bhizinesi Chirongwa Mune Hupfu Kugadzirwa
Muchina wakasarudzika weupfu wemuchina waunza shanduko muhupfu hwekugaya zviyo, mumusika weupfu weChina. Iyo hombe furawa yekugaya fekitori inoita kunge yatora chikamu chikuru, uye hazvisi chete nekuda kwekuwanda kwekugadzirwa, ivo vane rakanyanya kuomarara hupfu hwebhizimusi chirongwa kupfuura mamwe. Iyo yakanaka bhizinesi chirongwa haisi iyo rombo rakanaka remafekitori makuru, iwo madiki nepakati epakati eupfu mafirinendi emiti anogona kuita zvakafanana uye kubatsirwa mairi futi. Sezvo marongero ehupfu hwakakura zvigayo anogona kuve akajeka uye akazara, iwo matipi anotevera anobva kune imwe yepamusoro furawa chigayo fekitori muChina.
Hupfu chigayo michina
1. Iko kudzora kwemhando yegorosi yako yakasvibirira: gadzira timu yekutenga kutsvaga gorosi iro rinogona kusangana neako ekugadzira zviyero. Semuenzaniso-iyo masarasara emushonga wezvipembenene chinhu chakakosha.
2. Iyo inogadzira maitiro kudzora: kuenzanisa iyo yekuchenesa mhedzisiro nguva dzese, ita kutsunga kweupfu kuchena uye yekugaya dhigirii, kuongorora mashandiro evashandi kudzivirira zvisina basa zvemidziyo zvikanganiso uye kuchengetedzeka matambudziko.
3. Nhanho yega yega yekugadzirisa ichaitwa mumakamuri akapatsanurwa, nenzira iyi kusvibiswa kunobva kune imwe nharaunda kunogona kudzivirirwa.